Masaajidda Jarmalka oo Sabtida la furayo iyo shuruudo dhowr ah oo laga raba qofkii doonaya inuu masjidka ku soo tukado
Mogadishu - 01:25:15
Wednesday May 06, 2020 - 15:58:08 in Wararka by Super Admin
Kaddib markii dowladda Jarmalku ay khafiifisay bandowgii dalka saarnaa si loo yareeyo faafitaanka cudurka Coronavirus ayaa waxaa haatan si tartiib ah dib loogu furayaa masaajidda Jarmalka laga billaabo Sabtida soo socota oo ay taariikhdu ku beegan tahay 9 May.
Laakiin shuruudo dhowr ah ayaa laga doonayaa masaajidda, waxaana ka mid ah in dadka masaajidka ku tukanaya laga reebo magacyadooda iyo taleefoonnadooda si loola socdo haddii xalad caafimaad darro ay soo food saarto iyo in dadka masjidka imaanaya ay kooban yihiin.
Waxaa kale oo iyana la mamnuucay in la isticmaalo tubooyinka lagu weysaqaato ee masjidka, halka salaadaha dad badan ay soo xaadiraan sida Jimcaha, Cishaha iyo Taraawiixdana aan la ogoleyn in masjidka lagu tukado.
Carruurta ka yar 12 sanadood ayaa iyagana loo ogoleyn in ay masaajidka yimaadaan, halka dadka cibaadeysanayana ay xirnaan doonaan maasgarada wejiga, isla markaana kala fogaan doonaan.
Tirada dadka Jarmalka ee uu ku dhacay Coronavirus ayaa waxay mareysaa in ka badan 167,000 inkastoo Jarmalku ka dhimasho yar yahay marka loo eego dalalka kale ee Yurub ee uu si xun u haleelay COVID-19, waxaana keliya Jarmalka caabuqan kaga dhintay 6,993 qofood.